Yini ekulo? Kuphi? Kanjani? Amasu Okumaketha Wewebhu | Martech Zone
NgoMgqibelo, ngoMashi 1, 2008 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Lapho uzovula isitolo, unquma ukuthi usibeka kuphi isitolo, uzofaka ini esitolo, futhi ubayisa kanjani abantu kuso. Ukuvula iwebhusayithi, noma ngabe kuyisikhungo sokuthengisa noma cha, kudinga amasu afanayo:
Kuzoba yini kuwebhusayithi yakho?
Izoba kuphi iwebhusayithi yakho?
Bangayithola kanjani abantu?
Kuzoba yini kwiwebhusayithi yakho?
Kholwa noma ungakukholwa, kunezinkinobho ezimbili zokugcina isitolo. Iningi labantu linaka okubaluleke kakhulu, okuthengwa ngabantu. Eyesibili ayicaci kangako, noma kunjalo. Yilokho abantu abakhuluma ngakho. Isibonelo? Ngivame ukuya esitolo sendawo sekhofi. Banakho konke okufunwa ngumthandi wekhofi - indawo ekhululekile, abasebenzi abakhulu, abantu abakhulu nokudla okumnandi.
Isitolo sekhofi sinikeza ezinye izinto, noma kunjalo, abantu abakhuluma ngazo. Banikela ngomculo obukhoma ngoLwesihlanu nangoMgqibelo. Banobuciko obuhle kuzo zonke izindonga izivakashi ezingazithenga. Futhi banamagumbi amaningi amaqembu angawavakashela futhi ahlangane nawo - ngakho-ke babamba imihlangano yeChamber of Commerce, Abenzi bemvula, amaQembu eSonto, ubusuku bezinkondlo, njll.
Isitolo sekhofi senza kahle impela! Ikhofi lilodwa lizogcina ibhizinisi abanalo - kepha ngaphandle kwesabelomali sokukhangisa, ngezinye izinto ezisiza ukuthola abashisekeli abasha. Yingakho ibhizinisi liqhubeka nokukhula ngemuva konyaka.
Iwebhusayithi yakho ingahle ibe nokuqukethwe okuhle, njengoba nje nesitolo sekhofi senza ikhofi elihle kakhulu. Kepha lokho akusho ukuthi kukhona ozayo! Kunamasu amaningi okusiza ukukhulisa ibhizinisi lakho okufanele ulisebenzise:
Ukuthola ezinye izindlela zokwakha ukumaketha ngomlomo… ukuphawula kwamanye amasayithi, imikhankaso yegciwane, ukukhuluma esidlangalaleni, amakhadi ebhizinisi ebhulogi, ubamba iqhaza ekuxhumaneni nomphakathi, social ibhukumaka, ukuxhumanisa namanye amasayithi (ukukhushulwa okuphambene).
Likuphi isayithi lakho? Kubukeka kanjani? Abantu bakuthola kanjani?
Uma uvula isitolo, into yokugcina ozoyenza ukwakha amamayela ambalwa ukusuka emgwaqeni omkhulu bese uvula ibhilidi elibhidlika. Udinga ukubeka isitolo lapho abantu balindele ukuthi sibe khona nalapho abantu bangasithola khona.
Ufuna nokuvula isitolo esihle futhi abantu abafuna ukubuyela kuso. Kunesitolo samakhompiyutha ezansi komgwaqo engihambe kuso kodwa angikaze ngingene kuso. Ingaphakathi lakhona libukeka njengekhabethe lokugcina impahla elinemishini egcwele yonke indawo. Kepha uma ngiya ku-Best Buy, angikwazi ukuzibamba kodwa ngizihambele phansi odongeni lwamathelevishini wesikrini esicaba njalo. Ngithanda ukuvakashela i-Best Buy njengoba ngithanda ukuthenga lapho ngenxa yobuhle bayo.
Ukuvakasha kwakho okokuqala esitolo sami sekhofi futhi uyazi ukuthi awukho ku-Starbucks. Kunemibala egqamile, ubuciko obuningi, futhi isiteshi se-barista sibhekene nabashisekeli njengoba bengena. Lesi siteshi sikhona futhi buqamama nomnyango wangaphambili, ngakho-ke abantu banesikhathi sokubona ukuthi ubani osesitolo futhi banqume nge-oda labo. Akuyona i- umugqa wokukhiqiza isitolo esenzelwe ukukujaha futhi ungene.
Kunamasu ambalwa endawo yakho yesayithi nokuhlelwa okufanele ucabange ngakho.
Ukuklama nokusebenzisa amasu enjini yokusesha ukuze abantu bathole isiza sakho. Lokhu akusho ukukhokha ngokukhokha ngokuchofoza ngakunye - kepha kusho ukubhalisa isiza sakho nge Ukucinga Engines, kufakwa i robots.txt ifayela ukungenisa ama-bots oseshayo, nokusebenzisa Amamephu amasayithi ukuhlinzeka ngesikimu sokuzulazula ezinjini zokusesha ezizula kusayithi lakho, ukwazisa izinjini zokusesha lapho wenza izinguquko, nokubhala okuqukethwe yizinjini zokusesha.
Khetha igama lesizinda elihle. Lesi yisizinda esilula ukuthi abantu basikhumbule, isandiso se-.com (sisabalulekile nanamuhla), futhi asinakho ukuguquguquka. Abantu bazokhumbula i-yourstore.com, kepha ngeke bakhumbule i-bots-r-us.info. Kwesinye isikhathi izizinda ezinhle kakhulu amagama angukhiye owafunayo. Isibonelo esisodwa: ibhulogi yami ingenza kangcono kakhulu kwizinga le-SEO uma igama lesizinda line-'marketing' noma 'technology' kuyo.
Ubuhle besayithi. Ukuhlelwa nokuhlungwa kwesiza sakho kudinga ukukhombisa ubuchwepheshe nesimo sengqondo ofisa ukusiveza. Bengihlala ngithi angikhathazeki ngalokhu - bekukhuluma ngokuqukethwe. Nganginephutha, noma kunjalo. Amasayithi amakhulu abona inzuzo kuthrafikhi nge Umklamo omusha. Ufuna ukuvula isayithi le-Web 2.0? Qiniseka ukuthi ibukeka njengesiza seWebhu 2.0!
Ngabe abantu babagcina kanjani kusayithi lakho futhi babuya?
Uyiqambe kahle, unempahla efanelekile, utshele abantu ngayo… sebeqala ukuza kepha ubagcina kanjani? Uma ungenakho okuqukethwe okwanele namasu wokugcina abantu bebuya, uzosebenzisa sonke isikhathi sakho ukuthola izivakashi ezintsha esikhundleni sokugcina lezo onazo.
Okuqukethwe okuhle nokuphoqelelayo lokho kunentshisekelo kubafundi bakho kuzobagcina bebuya.
Ingabe isiza sakho sine- RSS okuphakelayo? I-RSS akuyona nje ubuchwepheshe obuthile, kuyisu elihle lokugcinwa. Noma umuntu engabuyanga kusayithi lakho isikhashana, bangahle bakhubeke kulo ekuphakeleni kwabo ngezikhathi ezithile - mhlawumbe lapho unikeza abakufunayo!
Ingabe isayithi lakho linenketho yokubhalisela i-imeyili? Futhi, leli ithuluzi elihle lokugcina, lazisa amathemba anentshisekelo noma amaklayenti asevele akhombisile intshisekelo (ngokungena ku-imeyili yakho).
Kukhona okuhlukile. Ngisebenzise ngobuqotho ukukhetha kukaPrada lapha ngoba ngithole i-athikili esitolo sakwaPrada maphakathi nendawo ... Ngicabanga ukuthi indawo esabekayo ingaba umkhankaso omuhle we-virus kulezi zinsuku!
Tags: ukwakha iwebhusayithiisitolo sekhofiigama lesizindapradaukugcinwaSiteokuqukethwe kusayithiesitoloiwebhusayithiizwi lomlomo
ISuper Bowl yethu yango-2012, inguqulo 2!